Miiskeyga Toddobaadkan + Dejinta | Laga soo bilaabo Linux
Degaankeyga + Toddobaadkaan
Qaabeyn ama u qaabeyn ku saabsan Desktopkeyga waligey igama qaadin waqti dheer, runtiina waxaan qorsheynayaa inaan sidaa uga tago waqti dheer. Hadda waxaan beddelay kaliya mawduuca daaqadaha, laakiin inta soo hartay waa sidii hore. Maxay kula tahay
1.1 Mawduuca Gtk, Mawduuca Icon iyo Mawduuca Daaqadda (Xfwm)
1.2 Guddi Sare.
1.3 Guddi Hoosaad
Hadda, sidee ayaan ugu suurtagashay inaan yeesho muuqaalkan? Waa hagaag, aad u fudud, aan u aragno qayb ahaan qayb ahaan. Bilowga waa inaan dhahaa wax walba oo aad shaashadda ka aragto ma qaadaan wax dheeri ah oo aysan lahayn Xfce.
Mawduuca Gtk, Mawduuca Icon iyo Mawduuca Daaqadda (Xfwm)
Dulucda aan adeegsanayo ayaa ah Zukitwo. Waxaan fureynaa konsole waxaana dhignaa:
Tan waxaan horeyba ugu nuqulnay galka mawduuca / usr / wadaag / mawduucyo / waana inaan iska xulnaa uun. Aan aadno Menu »Settings» Muuqaalka waana xulannaa.
Waxaan ku laabaneynaa terminaalka oo waxaan dhigey:
Kadib waxaan aadeynaa tabanka astaamaha oo xulo Dugsiga Hoose:
Ugu dambeyntiina waa inaan doorannaa qurxinta daaqadda, markaa waxaan aadeynaa Menu »Settings» Maareeyaha Daaqadda.
Waa inay ku soo baxdo si caadi ah Zukitwo, maxaa dhacaya oo aan dib ugu magacaabay galka Zukitwo_Cusub maxaa yeelay waxaan sameynayay tijaabooyin 😀
Labada dhinac ee kore iyo hooseba waxay leeyihiin midab asal adag. Si tan loo sameeyo waxaan si sax ah u gujineynaa guddi »Guddi» Dookha Guddi »Muuqaal oo waxaan uga tagnay sidan:
Nidaamka loo yaqaan 'Elements' ee guddiga sare waa sida soo socota:
Xaalada kuwa kala soocaya, waa inaan labo jibaarnaa guji oo aan calaamadeynaa xulashada: Ballaarin.
Marka laga hadlayo guddiga hoose waxaan u isticmaalaa sida Dock, qaabeynta ayaa isku mid ahayd marka la eego Muuqaal, laakiin kuma jiraan xulashooyinka guddiga laftiisa, taas oo u eg sidan:
Qaybaha waa inay u ekaadaan sidan:
Haddii aad aragto dhammaan astaamaha ku yaal dhinaca bidix wax kale ma aha oo keliya wax billowga iyo Liiska Daaqadda xaq la'aan ikhtiyaar: Muuji sumadaha badhanka, si ay kaliya astaanta u muuqato. Aasaasida launcher wax dhib ah malahan gabi ahaanba, laakiin hadaad rabto, waxaan sameyn doonaa qoraal kale oo aan ku muujiyo nidaamka. 😀
Waxa kaliya ee haray waa in la doorto gidaar wanaagsan oo lagu socdo ndo
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Degaankeyga + Toddobaadkaan
Hagaag, waxay ila tahay wax aad iila wanaagsan, laakiin dhadhankeyga baarka kore iyo kan hoose waxbuu siinayaa wax yar oo hufan iyo inuusan sidaa u madow, laakiin, horay ayaad u socotaa, hahahaha,
ha ku tusin, waa iska kaftamid
ayad galka kumbuyuutarka ama ka saar ama masax sanduuqa qoraalka
Hahahaha waxba ma dhacaan, anigu ma xanaaqsanahay hahaha. Waad ku mahadsantahay soo jeedinta. Fayllada dusha desktop-ka ku yaal waa iska nasiib, weligay ma isticmaalo 😀
waayahay, aan aragno marka aad sixitaanada shaashadda gelineyso, oo si kadis ah labada astaamood ee midigta ka soo saaraha hoose ay u dhigayaan kuwa kale, ugu yaraan, hahaha
oo waxaad dhihi doontaa; Ninkani wuxuu helay guntinteydii, huh? hahaha
Waxaan horeyba u cusbooneysiiyay boostada qabashada iyada oo aan lahayn astaamaha. Hadda, ku saabsan midabka astaamaha launcher-ka, arrimihu way isku murmayaan, maxaa yeelay kuwa midigta ku yaal ayaa ah astaamaha dalabka (sida uu dhigayo Dugsiga Hoose) iyo kuwa bidixda ku yaal waa astaamo aan ka soo qaatay AwOken. Haddii aan hal mowduuc u dhigo wax walba, markaa waan kala sooci kari waayey launcher iyo liiska codsiyada furan 😛
Waa wax lala yaabo inaysan lahayn wax kala sooc ah, tusaale ahaan, sanduuq ama dhibic hoose, iwm, oo loogu talagalay codsiyada furan.
si fiican waxaad had iyo jeer gelin kartaa dekedda kuwa badan oo jira,
Taasi waa mid ka mid ah "khaladaadka" qaabeyntaada (Waxaan ku soo lifaaqayaa khaladaadka maxaa yeelay halkan qof walba wuxuu uga tagayaa desktop-ka sida uu doono). Laakiin maaddaama ay wax walba leeyihiin hawo xoog leh Mac oo aad u socoto minimalist, maxaad u isticmaali weyday curiyaha ugu caqliga badan ee desktop-ka Mac, xero? Launchers-ka hal dhinac iyo barnaamijyada kale ee la furayaa waa qashin-bannaan, waxay noqon kartaa jahwareer iyo bilicsanaanta astaanta astaamaha aad dooratay uma muuqato mid aad u wanaagsan.
Laakiin taasi waa ra'yigeyga (sidoo kale waxaan u maleynayaa inay tahay qashin qubka shaashadda in la isticmaalo laba baararka marka wax waliba hal ku habboon yihiin, waxaana xaqiiqdii jira dad badan oo naqshadeeyayaal ah oo aniga igu khilaafsan).
Waan aqbalayaa dhaliisha aniga oo raali ka ah. Marka hore ma jecli "Docks", marka aniga ahaan waa wax cusub in la helo guddi fuliya shaqadan. Waxaan la wadaagayaa fikradda ah inaan adeegsan karo mid badan Docks in ay jiraan GNU / Linux, laakiin waa adeegsi dheeri ah oo aanan u baahnayn. Si kastaba ha noqotee, waxaan doonayaa inaan tijaabada sameeyo oo aan ka tago desktop-ka sida uu hadda yahay 😀
Dhamaan dekadaha la heli karo, Qaahira-Dock iyo Docky ayaa ah kuwa aan ugu jeclahay. Midka labaad ee aanan isticmaalin maadaama ay leedahay ku tiirsanaan badan oo Mono ah iyo Qaahira-Dock waa mid aad u fudud. Waxaan si dhab ah isugu dayay inaan u isticmaalo sida aad halkaan ka arki karto, laakiin taasi waa sidaas, mowduucyo badan oo aan saaray, cidina kuma qancin .. Waxaan dib ugu laaban doonaa guddiga hadda .. Waa inaan isku dayaa AWN… =)
Uppss waan ilaaway inaan dhigo xiriiriyeyaasha. By habka, waxaan kaliya isku dayay A.W.N. kanna waan hayaa Waa kuwan labada shaashadood:
Haddii aadan rabin inaad qarash gareyso ilo dheeri ah, waxaa jira deked badan, waa run. Marka waa inaad kala doorataa u adeegsiga iyo waxqabadka. Laakiin waxaan mar hore kuu sheegayaa haddii aad la qabsato adeegsiga dekedda, ma rabi doontid inaad ku laabato qaabkii hore.
Waxaa intaa dheer, haddii aad si fiican u qaabeyso AWN waxaad sameyn kartaa iyada oo aan la helin guddiga sare oo aad keydin karto booska.
Hagaag, hada waxaan isticmaalayaa AWN, oo kolba mar xidho (anigu garan maayo sababta) laakiin waa mida ku haboon waxa aan doonayo
Waa miyir qabaa. Waan ka helay 🙂
Waxaan doonayay inaan isku dayo nooc cusub oo ah XFCE muddo dheer (ma aanan isticmaalin sanado badan, badanaa sababtoo ah Thunar, oo aanan waligey jeclayn). Waxay u badan tahay sida ugu dhakhsaha badan ee aan u banneeyo meel ka mid ah guriga waxaan u dhigi doonaa si aan u tijaabiyo oo markaa aan ugu beddelo LMDE Gnome, oo ah waxa aan ugu isticmaalo shaqada. Haddii uu jiri lahaa liis-gareynta 'XFCE' ...
Waad isticmaali kartaa Marlin ama Nautilus lafteeda 😀
Mahadsanid saaxiib, horeyba waxaan u hayaa mowduuc kale oo weyn oo ku saabsan Lap + Sabayon + Xfce XD.
Miyaad horeyba Xfce ugu rakibtay Sabayon? Ii sheeg, sidee tahay xaalkaaga * - *
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo qoondeeyo furayaasha multimedia (ciyaar / hakin, ku xig, horay) hore ee xfce: D. Taasi waa sababta kaliya ee aan wali u isticmaalo gnome3, si aan ugu awoodo inaan ku meeleeyo shaqooyinkaas furayaasha aan doonayo.
Ma figradayda baa mise waa maamuus dadweyne macOS X miiskaaga? ... badhannada daaqadda bidix, menu iyo bar hawsha ku taal xagga sare iyo dekedda xagga hoose ...
Ha! Ma ahan cashuur la siiyo OS X, in kasta oo aanu cidina sir ahayn (sifiican baan usheegay) Waan jeclahay muuqaalkiisa. Badhamada bidix, ka soo Ubuntu Way hirgalisay iyaga markii ugu horeysay, waxaan bilaabay inaan u adeegsado sidan oo kale waana la qabsaday isla markiiba. Ma garanayo sababta ay sidaas iiga sii raaxo badan yihiin. Had iyo jeer waxaan idhi haddii dadka Apple (dadka hal abuurka badan leh iyo fikradaha naqshadeynta ee aadka u fiican) ay had iyo jeer u isticmaali jireen sidaas oo kale, sababo jira awgood ayay noqon doonaan oo kama bixi doonaan damac weyn.
Kuma dhahayo xaalad xun, liddi ku ah, sidaad u sameyso sharraxaadda iyo shaqeynta macOS X Waxaan u maleynayaa kan ugu fiican. Xaqiiqdii qaabeynta kumbuyuutarka ayaa sidoo kale ku jirta qaabka macOS X laakiin adigoon gaarin minimalism-kaaga.
Waan ogahay inaadan ku dhihin vibes xun ^^ maxaa yeelay sidaad dhahdo, waxaan ka ogahay shaashadaha shaashadaada inaad sidoo kale jeceshahay qaabka Mac OS X =)
Waxaan u maleynayaa inay ugu wacan tahay waxyaabaha soo socda:
On Mac badhamada waxay ku jiraan sida soo socota: Xidh, yaree oo kordhi.
Haddii waxa aad sameyn doontid uu xiro daaqadda oo aad guul darreysato, waxa ugu dambeeya ee aad dooneysaa waa inaad aragto in daaqadda la weyneeyay
Waxaan ku hayaa isla nidaamkaas. Laakiin waxaan u maleynayaa inay jirto sabab ka baxsan waxa aad sheegeyso. Tusaale ahaan, aniga ahaan waa iga raaxo badan tahay in daaqad la xiro oo Mowjadaha Codsiyada aad loo soo dhoweeyo. Wax la mid ah oo aan qiyaasayo inay ku dhacaan baararka menu-ka OS X ..
Sababta ay badhamadu ugu raaxeysanayaan dhanka bidix ayaa ah maadaama inta badan ay jiirka gacanta midig ku isticmaalaan, dhaqdhaqaaqa ka socda geeska bidix ee kore ee bartamaha (goobta oo inta badan ah aagga shaqada) ayaa ka fudud in la sameeyo midka ka taga bartamaha ilaa geeska midig ee kore. sidan oo kale waxaa jira khad ka baxa geeska bidix ee sare una socda dhinaca midig ee hoose, oo ku sii fidiya bartamaha, iyo calaamado, si ay ugu fududaato la qabsiga jiirka, socodka shaqada. taasi waa sababta sidoo kale menu-ka ku jira mac ay ku taal geeska bidix ee kore.
Marka la eego isticmaalka dekedda ama maahan, haddii kombuyuutarkaaga uu haysto ilo ku filan, waa inaad ka faa'iideysataa iyaga oo isticmaalaya barnaamijyo ku siinaya waxqabad. Xusuusnow inaad haysato xusuusta wan oo aadan isticmaalin waxay lamid tahay inaadan haysan, oo taa badalkeeda aad kubixiso barnaamijyo gaar ah oo aad kuheli karto waxaad raadineyso si dhaqso leh, waxay lamid tahay wankii lumay inaad xawaare kahelayso
Ku jawaab manuhank
Waad ku mahadsantahay cadeynta dhaqdhaqaaqa calaamadaha. Waan ogaa inay jirto sharaxaad macquul ah. Waxa aad leedahay runti waa run 😀
Wax kale: Waan ogahay in desktop-kaaga aad mar walba ku dareemeyso guriga, sidoo kale in astaamaha monochrome ay yihiin kuwo aad u qurux badan. laakiin waxaan hubaa in adeegsiga astaamaha midabbada oo buuxa halkii laga isticmaali lahaa monochrome ee codsiyada ay kaa badbaadin doonto shaqada maskaxda (xitaa haddii ay tahay mid aan la aqbali karin, dhamaadka maalinta ayay muujineysaa) ogaanshaha astaanta loogu talagalay codsigeeda.
gnome 2 waxaa ku jiray guntin-tufaax muujisay badhamada daaqada, iyo sidoo kale cinwaanka (midnimada ay hada sameyso) ee foomka q markii aad kordhisay, cinwaanka cinwaanka daaqada ayaa la waayay oo wuxuu ku jiray sidii uu ugu dhexjiray guddiga. taasi waxay ahayd (waana helay, maadaama aan isticmaalo midnimo) aad u raaxo badan tan iyo markii daaqad laga xidho dhaqdhaqaaqa jiirka ayaa ka fudud in la sameeyo. illaa iyo inta gnome 2 applet loo adeegsan karo looxyada XFCE. Waxaan sidaa u idhi maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inay waxtar weyn u yeelan laheyd desktop-kaaga
Waad ku mahadsantahay soo jeedintaada manuhank, runti kadib taladii ay Metalbyte isiisay waxaan ku badalay gudiga AWN 😀
[qaabka troll on]
Osx wuxuu u muuqdaa mid kafiican
[qaabka troll of]
Way wanaagsan tahay, halkan qof kastaa wuxuu leeyahay dhadhankiisa gaarka ah waana wax iska caadi ah inay la qabsadaan deegaankiisa baahiyahooda. Uma maleynayo inay tahay mid loogu talagalay in lagu qanciyo dhammaan kormeerayaasha, laakiin waa halkii isticmaalaha maalin kasta adeegsada, oo isbadalkan ku sameeyay si fiican u garanaya waxa uu doonayay ama raadinayay.
Shakhsiyan, ma jecli docks-ka qaabka loo yaqaan 'MAC-style', waxaan doorbidayaa golaha iyo maareeyaha hawsha caadiga ah; si kama-dambeys ah ayey uga dhakhso badan tahay daaqadaha furan, in kasta oo aan qaddariyo go'aamada kuwa kale.
Waxaan kaaga tagayaa shaashadda shaashadayda usbuucii hore (maanta mar horeba aad buu uga duwan yahay):
Qof kastaa wuxuu leeyahay dhadhankiisa gaarka ah wuxuuna shaqsiyan u qoondeeyaa goobtiisa shaqada oo ku saleysan iyaga; Uma maleynayo inay dooneyso inay qanciso kormeerayaasha, kaliya isticmaalaha fuliyay isbadalkan sifiican u og waxa uu sameynayo.
Shakhsiyan, bilicsanaanta 'MAC' wax badan igama tuurineyso, waanan necbahay docks - maareeyaha hawsha caadiga ah wuxuu umuuqdaa mid wax ku ool ah oo dhaqso badan. Dabcan anigu waxaan ahay xoogaa adeegsade KDE ah, oo raadinaya ugu yaraan deegaan culeys badan, haha.
In kasta oo wax walba jiraan, usbuucii la soo dhaafay waxaan ku qurxiyey Arch-ga oo leh qaab isku dhafan oo MAC ah, arag waxa aad u malaynayso:
waa mid qurux badan oo qurux badan waana jeclahay midabada,
hal shay ; sida loo dhigay dhinaca bidix ee daaqadda, ma dhigaysaa macluumaad?
waa in aanan heli karin
ok, waan ogahay sida ay tahay, salaan
Xaqiiqdii, waxaad u maleyneysaa inaad horeyba ugu aragtay qabashada mawduuca EOL "Tani waa GNU / Linux", maxaa yeelay magacaagu wuxuu ii muuqdaa mid aan aqoon u leeyahay, haha ​​- inkasta oo halkaas aan ku isticmaalo magaca WolfAbstract "- ..
Su’aal wanaagsan. Marnaba sida caadiga ah weligay ma isticmaalo noocyadan furaha ah, si kastaba ha noqotee waan baari karnaa haddii Xfce ay bixiso ikhtiyaarkan (waan hubaa inay sidaas tahay)
Haye, xitaa haddii aanan sameyn karin furayaashaas shaqooyin gaar ah could Laakiin aad baan u hubaa in xfce4-ka cabirkoodu si toos ah u socdo ...
Runtii, horay ayaan u soo arkay, laakiin ma aanan xusuusan halka, salaan
Aad u fiican, sayidkiisa 😉
Sidee qurux badan tahay, runtu waxay tahay inay tahay gabar qabow.
Sideed ugu badashay badhamada bidix Zukitwo?
Waa run inaan ku qasbanahay inaan ku beddelo gacanta -.- 'maxaa yeelay xulashadaas Zukitwo ayaa u xanniban Xfwm. Hadda waxaan sameeyaa qoraal si qof walbaa u ogaado sida loo sameeyo.
Waa tan heheheeygii! Waxaan ahay nin cusub .. Waxaan sugaa talo soo jeedin, waad dhaliishaa wax kastoo ay tahay!
Hadaad rabto waxaad kula wadaagi kartaa boostada golahayaga 😀
Waxaa loo heli karaa soo dejinta FS Icons Ubuntu
Xagee ku maareeyaa fariinta, Thunderbird ama Firefox?